गल्कोट नगरपालिका भित्रका कृषकहरुलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा कृषि सामाग्री प्रदान ! – ebaglung.com
गल्कोट नगरपालिका भित्रका कृषकहरुलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा कृषि सामाग्री प्रदान !
२०७५ चैत्र २६, मंगलवार १६:५१	Top News, थप समाचार
गुमानसिँह भण्डारी,गल्कोट २०७५ चैत २६ । गलकोट नगरपालिकाले नगरपालिका भित्रका कृषकहरुलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा कृषि सामाग्री प्रदान गरेको छ । प्लाष्टिक टनेल, मौरिघार र बिउ राख्ने भकारी अनुदानमा प्रदान गरिएको गलकोट नगरपालिकाका नगरप्रमुख भरत शर्मा गैरेले बताए । नगरपालिका भित्रका करिब २ सय ३६ जनालाई टनेल प्रदान गरिएको छ । नगरपालिकामा २ सय २३ वटाको सिफारिस आएपनि २ सय ५० थान खरिद गरिएको थियो । बाँकी रहेका टनेल समेत सम्पर्कका आधारमा कृषकहरुलाई प्रदान गरिने नगरउपप्रमुख रेनुका काउचा मगरले बताईन् ।
उक्त टनेल गलकोट नगरपालिका १ मा ३८, २ मा २२, ३ मा ३५, ४ मा १०, ५ मा २२, ६ मा १५, ७ मा ३३, ८ मा १७, ९ मा ९, १० मा १५ र ११ मा २५ जना कृषकहरुले टनेल लगेका छन । सम्पुर्ण टनेल खरिद गर्दा ९ लाख खर्च भएको छ । जसमा एउटा टनेललाई ४ हजार ८ सय परेकोमा कृषकहरुलाई २ हजार ४ सयमा प्रदान गरिएको गलकोट नगरपालिकाका कृषि तथा पशु सेवा शाखा प्रमुख चिन्तामणि शर्माले बतए । त्यस्तै नगरभित्रका ४७ जनाले बिउ राख्ने भकारि पाएका छन । जसअन्तर्गत गलकोट नगरपालिका १ मा ५, २ मा ४, ३ मा ४, ४ मा ४, ५ मा ५, ६ मा ५, ६ मा ४, ८ मा ४ ९ मा ४, १० मा ४ र ११ मा ४ जना कृषकले भकारि पाएका हुन । ६ लाख ४० हजारमा खरिद गरिएका ४९ भकारीमा प्रति भकारी १३ हजार परेको शर्माको भनाई छ । ५० प्रतिशत अनुदान अन्तर्गत कृषकलाई ६ हजार ५ सयमा प्रदान गरिएको शर्माले बताउनुभयो । त्यस्तै नगरभित्रका १ सय २५ जना कृषकले मौरिका घार भएका छन । प्रति घार ३४ सय ५० परेकोमा कृषकलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा १७ सय २५ मा प्रदान गरिएको नगरपालिकाका प्रवक्ता हेम बहादुर भण्डारीले बताए ।
४ लाख ५० हजारमा १ सय ३० थान मौरीका घार खरिद गरिएको थियो । त्यस्तै नगरपालिकाले नगरभित्रका ब्यवसायीक फर्म प्रवद्र्धन कार्यक्रम अन्तर्गत दुदिलाभाटीका बाख्रापालन ब्यवसायी पदम बहादुर कुबरलाई ३५ हजार अनुदान दिने बताएको छ । त्यस्तै दुदिलाभाटीकै कुखुरापालन ब्यवसायी ज्ञान बहादुर खत्रीलाई ३५ हजार, गलकोट नगरपालिका ७ का बाख्रा पालन ब्यवसायी अमर बहादुर थापालाई ३५ हजार दिने नगरपालिकाको कृषि तथा पुश सेवा शाखाले जनाएको छ ।
त्यस्तै प्राकृतिक गर्भाधान कार्यक्रम अन्तर्गत गलकोट नगरपालिका २ नरेठाटीका उमेश श्रीस र गलकोट नगरपालिका ७ का प्रेम बहादुर कार्कीलाई २०, २० हजार बराबरको बोका अनुदान दिने गलकोट नगरपालिकाले जनाएको छ ।
ताराखोला गाउँपालिकाद्वारा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शर्मालाई स्वागत !
वर्तमान राज्य व्यवस्थाबाट नयाँ जनवादी तथा समाजवादी व्यवस्थाको आशा गर्न सकिदैन : अध्यक्ष रेग्मी
बुर्तिवाङ २०७६ कात्तिक २७ । नेकपा जिल्ला कमिटि बागलुङका सदस्य चन्द्र अर्यालले बाम गठबन्धनका साझा उमेदवार खिमबिक्रम शाहीलाई विजयी गराउनु…